प्रकार: विरोधी-शिकन मिसिन, विरोधी-शिकन मिसिन, hifu
सञ्चालन प्रणाली: उच्च आवृत्ति
आवेदन: अंकित लिफ्ट, शिकन हटाउने
लंबाई: 5.0-25mm (1.0mm / चरण)
दूरी: 1.0-10mm (0.5 मिमी / चरण)
आउट शक्ति: 0.2-2.0J (0.1J / चरण)
लागू मान्छे: सबै उमेरका
इनपुट भोल्टेज: एसी 100V-230V
उच्च तीव्रता केन्द्रित अल्ट्रासाउंड (HIFU) सिधै छाला र प्रोत्साहित गर्न सक्ने र छाला गरेको कोलैजेन नविकरण र यसरी फलस्वरूप बनावट सुधार र छाला को sagging कम उपचर्म ऊतक गर्न गर्मी ऊर्जा सुनाउँछन्। यो शाब्दिक एक facelift को परिणाम achieves वा शरीर कुनै पनि आक्रामक सर्जरी वा इंजेक्शन बिना लिफ्टहरु, यसबाहेक, यो प्रक्रिया एक जोडी बोनस कुनै डाउनटाइम छ भन्ने छ।
यो प्रविधी अनुहार साथै सम्पूर्ण शरीर लागू गर्न सकिन्छ, र पनि, यो उत्तिकै राम्रो तरिकाले सबै छाला रंग को मान्छे को लागि, पराबैंगनीकिरण र तीव्र नाडी रोशनी को कि यसको विपरीत काम गर्छ।
13MM बोसो हटाउने
उच्च तीव्रता अल्ट्रासाउंड केन्द्रित लागू, केंद्रित ऊर्जा उत्पन्न र सेल्युलाईट तोड्न गर्न सेल्युलाईट मा deeoer जानुहोस्। यो विशेष गरी पेट र जांघ लागि, बोसो कम गर्न, आक्रामक प्रभावशाली र long- अन्तिम प्रभावकारी tratement छ।
उच्च तीव्रता बोसो ऊतक अप हीटिंग, बोसो समाधान गर्न उच्च ऊर्जा र राम्रो प्रवेश संग संयोजन उपचार, चयापचय को प्रक्रिया द्वारा triglyceride र फैटी एसिड उगलना समयमा, 13mm (प्रवेश को गहिराई) को बोसो मा अल्ट्रासाउंड लक्ष्य केन्द्रित, र को vessal र nurve छैन क्षतिग्रस्त हुनेछ।
1 डी एस-4.5D 4MHZ high- ऊर्जा प्रसारित गर्न प्रयोग आवृत्ति छाला, उपचर्म ऊतक गर्न अल्ट्रासाउंड केन्द्रित, को अल्ट्रासाउंड छाला 4.5mm, प्रत्यक्ष उपचर्म SMAS पत्र को एक गहिराई गर्न, "गर्मी coagulation" गठन भित्र पस्नु गर्न क्षेत्रीय, लक्षित यस्तो गाला, आदि रूपमा मोटा छाला,
2. डी एस-4.5S 7MHZ आवृत्तियों उच्च ऊर्जा प्रसारित गर्न प्रयोग छाला, उपचर्म ऊतक गर्न अल्ट्रासाउंड केन्द्रित, को अल्ट्रासाउंड 4.5mm को एक गहिराई गर्न छाला भित्र पस्नु गर्न, प्रत्यक्ष उपचर्म SMAS तह, पतली छाला गर्न, जस्तै निधारमा रूपमा लक्षित , पातलो र घाँटी।
3. डी एस-3.0 8 मेगाहर्ट्ज को उच्च आवृत्ति दिइरहनुभएको लागि, अल्ट्रासाउंड, 3.0mm को एक गहिराई गर्न छाला भित्र पस्नु गर्न कोलैजेन को छाला गरेको dermal तह सक्रिय लागि जिम्मेवार छ छाला ऊतक को dermis तह मा अल्ट्रासाउंड ऊर्जा केन्द्रित, प्रभावकारी बृद्धि को रूपरेखा को समेकन को प्रभाव, तर पनि ठूलो pores सुधार र झुर्रियाँ को उपस्थिति कम।
4 डी एस-1.5 10MHZ आवृत्ति उच्च ऊर्जा प्रसारित गर्न प्रयोग epidermis ऊतक गर्न अल्ट्रासाउंड केन्द्रित, को अल्ट्रासाउंड 1.5mm को एक गहिराई गर्न छाला भित्र पस्नु गर्न, पतली पुछ्ने मा छाला epidermis सक्रिय लागि जिम्मेवार छ।
5 मेट-13mm उच्च तीव्रता बोसो ऊतक अप ताप, बोसो समाधान गर्न उच्च ऊर्जा र राम्रो प्रवेश संग संयोजन, 13 मिमी (प्रवेश को गहिराई) को बोसो मा अल्ट्रासाउंड लक्ष्य केन्द्रित।
1 बरु एक गैर-इनवेसिव प्रविधी संग परम्परागत शल्य अनुहार लिफ्ट को।
2. छाला sagging कसिलो, sagging र उमेर बढन अन्य संकेत सुधार।
3. एक विशेष ट्रान्समिटर संग, उच्च-ऊर्जा छाला सतह प्रवाहकत्त्व देखि प्रसारण को SMAS पत्र अल्ट्रासाउंड केन्द्रित।
4 SMAS संकोचन: कोलैजेन Remodelling, elastine फाइबर संकोचन।
5 निर्दिष्ट लक्ष्य धेरै तापमान छोटो समयमा वा ध्वनि ध्यान उच्च ऊर्जा माथि 65-70 डिग्री माथि उत्पादन गर्न छाला तह, निर्मित "गर्मी उपचार" क्षेत्र मा, ध्यान कक्षहरू त्यसपछि पृथक्करण, fascia तीब्र सुधार, प्राप्त गर्न, जम छन् कस्मेटिक शिकन प्रभाव
6 गैर-इनवेसिव, सर्जरी पछि इंजेक्शन बिना कुनै सर्जरी, पदचिन्हछैन शिकन छाला कायाकल्प आराम गर्न कुनै समय, अल्ट्रासाउंड।
7 कुनै पनि उमेर, पुरुष र महिला दुवै फिट।
ऊर्जा उत्सर्जन ट्रान्समिटर छाला विभिन्न स्तर को एक किसिम सुसज्जित 8, केन्द्रित उच्च-ऊर्जा अल्ट्रासाउंड छाला तहहरू गर्न प्रसारित।
0.1-0.25 को9स्वामित्व उच्च गतिको प्रसारण प्रविधि।
एक स्तरित उच्च सटीक emitter ट्रान्समिटर को 10 माथि 15000 रेखाहरू निकै लागत प्रभावकारिता सुधार, कि यस्तै साधन तीन पटक हो।
स्थिर उत्पादन 4-10MHZ ब्रोडब्यान्ड प्रविधिको 11 अनन्य विकास स्तरित छाला उपचार प्रविधि संग राम्रो तरिकाले फिट।
12 द्रुत र छोटो उपचार समय: 30 मिनट एक अनुहार उपचार।
13 बिरामीको उच्च सन्तुष्टि।
14 उच्च गुणस्तर, कम उपभोग्य।
------ HIFU उपचार प्रक्रिया -----------
1 छाला सफाई।
2. लें फोटो र मार्ट को व्यवहार छाला क्षेत्र।
को ट्रान्समिटर र छाला बीचको सञ्चालकको रूपमा 3. Pt जेल।
4 मार्क जस्तै चिउँडो, घाँटी, दुवै विमान को पक्ष वरिपरि रूपमा उपचार क्षेत्र।
5 एक चिल्लो हात टुक्रा अत्यधिक केन्द्रित अल्ट्रासाउंड ऊर्जा जो सुरक्षित नामित गहिराई मा उपचर्म तह माथि heats सुनाउँछन्। प्रक्रिया असहज वा पीडादायी अधिकतम परिणाम प्राप्त हुँदासम्म बन्न गर्दैन भनेर रोगी गर्मी को तीव्रता प्रतिक्रिया गर्न आग्रह गरिने छ।
कहिल्यै चिउँडो ताकत किनारा (हाशिये जबडे स्नायु) र supraorbital (SUPRA कक्षीय कहिल्यै) क्षेत्र जोगिन6पे ध्यान।
7 पूरा, र कुनै रिकभरी अवधि पछि, स्किनकेयर उत्पादनहरु प्रयोग र बनाउन-अप गर्न सक्नुहुन्छ।
8 केवल एकपटक, पूर्ण प्रभाव बिस्तारै 2-3 महिना समय मा aprear हुनेछ।
9 अल्ट्रासाउंड छाला कस र लोच को परिणाम निम्न2-3 महिना नयाँ कोलैजेन पुनरुत्पन्न रूपमा भन्दा क्रमिक हुनेछ।
10 यो उपचार निम्न कुनै डाउनटाइम छ। केही विरामीहरु छाला को नम्र राता अनुभव, तर यो अस्थायी हुन्छ। परिणाम अप गर्न9महिना सुधार जारी। परिणाम 1 वर्षको लागि पछिल्लो गर्न सक्नुहुन्छ।
इनपुट भोल्टेज एसी 100V-230V हो 50hz-60Hz
उत्पादन पावर 0.2 2.0J गर्न (0.1J / कदम)
दूरी 1.0 10mm गर्न (0.5mm / कदम)
फोकल लम्बाई 5.0 25mm गर्न (0.5mm / कदम)
ट्रांन्सड्यूसर डी एस-4.5D, डी एस-3.0, डी एस-1.5, बोसो-13
1 कति transducers मिसिन साथ?
2. कति प्रत्येक tranducer लागि शट?
3. व्यवहार क्षेत्र?
आँखा, अनुहार, घाँटी, छाती, शरीरको।
4 प्याकेज के हो?
निर्यात मानक प्याकेज, भित्र Foams संग काठ मामला।
अघिल्लो: New Fashion Design for Liquid Dermabrasion Machine - Thermage RF fractional Micro needle machine for skin U-MR18-2S – URBEAUTY
अर्को: ठाडो 800w 808nm डायोड लेजर स्थायी कपाल हटाउने मिसिन यू-808
तपाईं कुनै पनि ग्यारेन्टी छ?
हो हामीसँग छ। पाहुना मिसिन मा 12 महिना ग्यारेन्टी दिइएको छ। छ महिना ह्यान्डलहरू लागि निःशुल्क प्रतिस्थापन ग्यारेन्टी, उपचार टाउको, र भागहरु।
तपाईंको पछि-बिक्री सेवा कस्तो छ?
हामी एक पेशेवर प्रविधि आफ्नो समसामयिक सेवाहरूको लागि टोली समर्थन छ। के तपाईं टेलिफोन, वेब क्यामेरा, अनलाइन च्याट (Google Talk, फेसबुक, स्काइप) द्वारा समय मा आवश्यक सहायता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एक पटक मिसिन कुनै पनि समस्या छ हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रस्ताव गरिनेछ।
तपाईं मिसिन कसरी प्रयोग गर्न सिकाउनु हुनेछ?
हो, हामी निर्देशन र अनुप्रयोगको लागि पूर्ण प्रयोगकर्ता पुस्तिका र उपयोग भिडियो प्रदान गर्न सक्छन्। र 24/7 अनलाइन सलाहकार सेवा तपाईं जे समस्या सुनिश्चित र जब तपाईं पूरा, तपाईं सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ। यो निर्देशन जो कोहीले पनि द्वारा संचालित गर्न सजिलो छ।
कसरी ढुवानी बारेमा?
मेशिन 2-3 दिन भित्र आफ्नो भुक्तानी को रसिद पछि पठाइएको गरिनेछ।
2D Hifu मिसिन
सौन्दर्य मिसिन अनुहार
सौन्दर्य मिसिन ट्रोले
जैव भारोत्तोलन अंकित सौन्दर्य मिसिन
अनुहार Slimming मिसिन
अनुहार सौन्दर्य मिसिन
Freckles पिग्मेन्ट आयु स्पट हटाउने सौन्दर्य मिसिन
Hifu31 मा
Hifu सौन्दर्य मिसिन
Hifu अंकित भारोत्तोलन मिसिन
Hifu एफडीए स्वीकृत
Hifu मिसिन अंकित लिफ्ट
Hifu यू एक
Hifu योनी कायाकल्प
Hifu योनी कस मिसिन
घर प्रयोग सौन्दर्य मिसिन
जेड अनुहार सौन्दर्य मिसिन
कोरिया आरएफ सौंदर्य मिसिन
Lipo Hifu अल्ट्रासाउंड
नयाँ अंकित सौन्दर्य मिसिन
प्लाज्मा मिसिन सौन्दर्य
पोर्टेबल Hifu मिसिन
व्यावसायिक अंकित लिफ्ट Sono रानी Hifu
आरएफ सौंदर्य मिसिन
अति आयु Hifu
अति छाला Hifu
अल्ट्रासोनिक सौन्दर्य मिसिन
वी अधिकतम Hifu
योनी कस Hifu
Hifu अंकित लिफ्ट शिकन हटाउने अनुहार मालिश पु ...